Ngwá Ọrụ Ngwaọrụ Ngwaọrụ
Ngwá ọrụ eme na ngwaahịa zọ
Post oge: Jul-21-2021
Anyị bụ ndị a ngwá ọrụ na-eme na ngwaahịa zọ ụlọ ọrụ. E kewara ụlọ ọrụ ahụ na ngalaba isii dị mkpa: imepụta, nhazi, mgbakọ, stampụ, na mmesi obi ike. Site na nkwukọrịta na ndị ahịa na ọrụ ịtụ ahịa maka nnyefe ngwaọrụ, njikọ ọ bụla nke mbupu ngwaahịa nwere njikọ chiri anya ...GỤKWUO »
Post oge: Jul-07-2021
Anyị na-akwadebe ma zipụ akụkụ ahụ maka ngwa ndị MAGNA mere. Anyị anwalela ọnọdụ nke oghere ọ bụla nke ọ bụla na-arụ ọrụ.GỤKWUO »
Post oge: Jul-01-2021
Mbupụ na Mexico. Ngwaahịa nke ngwa a bụ aluminom nwere ọkpụrụkpụ nke 1.0mm. Ọdịdị ngwaahịa ahụ dị mgbagwoju anya, ma ogo nha dị mkpa karị. N'ihi nnukwu oghere dị n'etiti ngwaahịa a, obosara nke njikọ njedebe nke ngwaahịa ahụ dị warara, ngwaahịa ahụ laghachiri ...GỤKWUO »
Footkwụ brek ụgbọ ala tooling
Anyị emeela ọtụtụ igwe eji agba ụkwụ ụgbọ ala maka Germany, Mexico na Spain. Anyị achịkọtara akụ na ụba nke ahụmịhe na ngwa ọrụ na ngwa ọrụ na nbugharị nke ngwa ọrụ a. Site na usoro izizi nke mbụ, oge bụ izu iri na abụọ. Emeela ka ọ dị mkpụmkpụ ruo izu 8-10 ugbu a, yana ...GỤKWUO »
Automobile na-aga n'ihu ngwá ọrụ
Post oge: Jun-17-2021
Ọ bụ oge mbụ ịme ngwa maka ndị ahịa German, ndị ahịa ahụ amatakwara ya. Onye ahịa ahụ nwere afọ ojuju maka àgwà anyị na ịrụkọ ọrụ ọnụ. Anyị jiri izu 2 chepụta ebu, izu 3 iji hazie, 4 iji zukọta ma mezie, na izu 1 iji mezue. Daalụ maka ntụkwasị obi gị ...GỤKWUO »
Automobile na-aga n'ihu ngwá ọrụ, A mpempe nke GESTAMP ngwá ọrụ na-exported ka Spain, ihe onwunwe ọkpụrụkpụ bụ 3.0mm, ihe onwunwe bụ JSH599R. Ngwá ọrụ ahụ mere ka ụlọ ọrụ 16 dị, akụrụngwa ahụ bụ 3350mm * 750mm, ụda ntụpọ bụ 1000T, na ebu ebu bụ 4.3T. Taa mbụ ngwá ọrụ na-agbalị, size nnyocha 8 ...GỤKWUO »
Car azụ cover ngwaahịa
Nke a bụ ngwa ọrụ na-aga n'ihu maka mkpuchi azụ ụgbọ ala. Onye ahịa nke ngwaahịa a chọrọ ka bayonet dị n'ime ya juputara na teepu nwere otu oke ịkpụ nke 14.8mm. Anyị nwere ọnya, nrụrụ na akwa akwa na bayoneti dị n'ime ime n'oge nnwale izizi ebu. Mgbe ụgwọ ...GỤKWUO »
Blue ìhè ogwe aka i scanomi
Post oge: Jun-02-2021
Anyị na-eme nyocha data ọkụ na-acha anụnụ anụnụ maka ịmepụta, ịkpụzi, na akụkụ dị mma, ma nye ndị ahịa akụkọ nyocha 3D. E meziwanyelarị ogo na izi ezi nke ngwa ọrụ a.GỤKWUO »
AT = 8.0 igwe anaghị agba nchara ebupụ na United States, ọkpọ ọkpọ 5.3mm, ahịa arịrịọ na-enwu gbaa belt, anyị ji 16mm dayameta T ntụmadị, 5.3mm akụkụ ogologo 7.5mm izute ahịa mkpa, ugbu a 50,000 kwa ọnwa iberibe na-na mmepụta maka ahịa . Anyị mere ...GỤKWUO »
T = 0.9 maka ngwaahịa aluminom. Onye ahịa ahụ rịọrọ warara nke etiti. Ihe warara ahụ ejighị n'aka mgbe mbụ anyị nwalere ngwa ọrụ ahụ. Ejiri usoro ịgbakwunye ọtụtụ ihe iji nweta afọ ojuju nke onye ahịa. Ugbu a ngwa ọrụ amalitela ịlele na ikpe ...GỤKWUO »
Ngwa mkpọchi mkpọchi
ọ igbachi ire ngwaahịa Ẹnam ekese na United States nọgidere na-emepụta 300,000 iberibe maka ndị ahịa, na nke ugbu a Ebu na ngwaahịa na-nyefere ndị ahịa maka mmepụta. Anyị nọrọ izu 5 maka ngwa ọrụ, izu 2 maka ịpịpụ, yana izu 1 maka mmepụta ...GỤKWUO »
ngwaike ngwaike ngwo ngwo na ngwa ngwa ngwa ulo
Post oge: Mee-11-2021
Nke a bụ ihe eji eme ihe maka ngwa akụrụngwa akụrụngwa na ngwa ụlọ. Emere ngwaahịa ndị a na United States. N'oge ebu n'ichepụta, anyị na-etinyere TICN mkpuchi brekka ebu akpụ akụkụ na punches aka na-eyi ndị na-eguzogide n'oge mmepụta. Kọmịshọna ...GỤKWUO »
Hongye Science and Technology Park, Nke 359, Education Road, Dalingshan Town, Dongguan City, Guangdong Province
Anyị bụ ndị a ngwá ọrụ na-eme na ngwaahịa zọ ụlọ ọrụ. E kewara ụlọ ọrụ ahụ na ngalaba isii dị mkpa: imepụta, nhazi, mgbakọ, stampụ, na mmesi obi ike. Site nkwurịta okwu na ndị ahịa na iji p ...